Imovie kaWill Smith "Ukukhululwa" kweApple TV + ijonge useto olutsha | Ndisuka mac
Ifilimu kaWill Smith "Ukukhululwa" kweApple TV + ifuna useto olutsha
NgoJulayi ophelileyo, sipapashe iindaba ezinxulumene nomxholo omtsha oza kwiApple TV + nabadlali abadumileyo. Sithetha ngemovie Ukukhululwa, Ekhokelwa nguWill Smith, ekhokelwa nguAntoine Fuqua kunye Ukufota okucwangciselwe ukuqala eGeorgia ngoJuni.
Nangona kunjalo, bobabini uWill Smith kunye nomlawuli, uAntoine Fuqua, batshintshe iingqondo zabo ngenxa ye Umthetho omtsha wokuvota waseGeorgia. Ngaphambili, uTim Cook wayesele ethethile ngokuchasene nomthetho omtsha weli lizwe ukuba kuthintela ukufikelela kuvoto.
Njengoko sinokufunda kwi I-Hollywood Reporter, Imuvi Ukukhululwa yiyo imveliso yokuqala enkulu eshiya urhulumente ngenxa yalo mthetho mtsha. Kwingxelo yokuba uWill Smith noAntoine Fuqua bayithumele kwimithombo yeendaba, singafunda:
Okwangoku, olu hlanga luyaxolelana nembali yalo kwaye luzama ukususa izinto ezishiyekileyo zobuhlanga kumaziko ukuze kufezekiswe ubulungisa bokwenene bobuhlanga.
Asinakho, kwisazela, ukubonelela ngenkxaso mali kurhulumente owenza imithetho yokuvota eguqukayo eyilelwe ukuthintela ukufikelela kuvoto.
Imithetho emitsha yokuvota yaseGeorgia ikhumbuza izithintelo zokuvota ezazipasisiwe ekupheleni koKwakha ngokutsha ukuthintela abantu abaninzi baseMelika ekubeni bavote.
Ngelishwa, siziva sinyanzelekile ukuba sihambise umsebenzi wethu wokuvelisa iifilimu ukusuka eGeorgia ukuya kwelinye ilizwe.
Ukukhululwa kuya kuba yinkwenkwezi uWill Smith kwindima ye Ikhoboka elibalekayo "Kuhambo olubi oluya eMantla, apho azibandakanya khona nomkhosi woManyano." Ibhalwe nguWilliam N. Collage, ifilimu isekwe kwibali eliyinyani.
iapile uthenge amalungelo efilimu ngeedola ezili-100 zeedola. Ukuthathela ingqalelo ukuba imveliso yayicwangciselwe uJuni, umboniso bhanyabhanya kunokwenzeka ukuba ulibazise umhla wokukhutshwa kuwo omabini amaqonga nakwiiApple TV +.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ifilimu kaWill Smith "Ukukhululwa" kweApple TV + ifuna useto olutsha
Umnyhadala ka-Apple wango-Epreli 20 ngoku usemthethweni
Intsomi yokufuna ixesha lesibini leTrailer ngoku iyafumaneka